Tan iyo Sabtidii lasoo dhaafay sii deynta taleefanka gacantu waa sharci darro Mareykanka | Laga soo bilaabo Linux
Isbeddel ku yimid DMCA -Digital Millenium Copyright-wuxuu dambi ka dhigayaa in la sii daayo taleefannada gacanta iyada oo aan fasax laga haysan hawlwadeennada taleefoon. The mobile la iibsaday kahor isbedelka wali lama sii deyn karo laakiin kuwa soo iibsada taleefan casri ah oo cusub xulashooyinku way yar yihiin.
Isbedelka sharciga ayaa dhacay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay - waa isla wax ka beddelka lagu aqoonsaday xuquuqda isticmaaleyaasha inay ku xirxiraan taleefannadooda, inkasta oo aysan ku jirin kiniiniyada (?) - laakiin dadka isticmaala waxay leeyihiin xilli kala guur ah 90 maalmood ilaa wax ka beddeliddu dhaqan galaan.
Ansixinta DMCA iyo gaar ahaan cabirkani wuxuu sababay caro dhowr ururo macaamiil ah. Kuwa kale, Hay'adda Elektiroonigga ah ee Frontier Foundation (EFF), oo difaacda xuquuqda iyo xorriyadda dadka isticmaala internetka iyo aaladaha elektiroonigga ah, ayaa su'aal ka keenay sharci ahaanshaha sharcigan.
Mamnuuca ayaa si gaar ah u saameynaya isticmaaleha maxaa yeelay suuqa taleefannada bilaashka ah aad ayuu u yar yahay. Badankood waxay iibsadaan taleefannada casriga ah ee ay ku kabaan hawlwadeennada oo haddii ay go'aansadaan inay iibsadaan taleefan bilaash ah marwalba kuma dari karaan qandaraaska xogta. Hawl wadeenadu had iyo goor ma sii daayaan taleefannada lagu iibiyo kabista, xitaa marka ay dhammaadaan muddada ugu yar ee joogitaanka.
Intaas waxaa sii dheer, cabirkan cusub wuxuu sidoo kale dhib ka dhigayaa in la sii daayo taleefannada gacanta ee gacanta labaad oo lagu iibiyo marinnada xaraashka sida eBay ama, ugu yaraan, waxay ka dhigeysaa kuwa doonaya inay sidaa yeelaan inay aad uga taxaddaraan hababka la doortay.
War murugo leh oo loogu talagalay dadka isticmaala taleefannada gacanta ee Mareykanka. Waa la arki doonaa sida tallaabadani u saameyn doonto milkiilayaasha taleefannada Android ama mustaqbalka Firefox OS ama Ubuntu Phone OS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Tan iyo Sabtidii la soo dhaafay sii deynta taleefanka gacanta waa sharci darro Mareykanka
Hadda yaa u diraya nin xoog leh inuu xiro? Wuxuu yidhi tanoo kale waxay dhacaysaa ilaa 20 sano. Waxa kaliya ee cadaalada ah ee ka hartay in la sameeyo ayaa ah ku tumashada sharciga. lacag la’aan taleefannadaaga gacanta, gringos!
Waxaa jira sharciyo cadaalad darro ah. Ma ku qanacsan nahay inaan adeeco? Ma waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka beddelno, oo u hoggaansano iyaga inta ka horeysa? Mise hal mar ayaynu ka gudubnaa? Haddii caddaalad darradu u baahan tahay wada shaqeyntaada, sharciga jabiya. " Thoreau
Waxaan si buuxda ugu raacsanahay faallooyinkaaga. Had iyo jeer waan dhaleeceynaa isaga, wuxuu umuuqdaa "qallafsanaan" laakiin runtu waxay tahay in, markale, uu ku dambeeyo inuu saxsanaado.